GAWRIDA T-30: SHARAXAAD, SOO SAARAHA, QEEXIDA - MISHIINADA GAARKA AH
Sababtoo ah marxaladda waqtiga iyo lama huraan xirashada Tareenada T-25, hoggaanka shirkadda Vladimir Tractor Plant ayaa go'aansaday inay joojiso wax soo saarka T-25 noocyada iyo bilawga marxaladda cusub ee soo saaridda wax soo-saarka T-30 noocyo.
Gawaadhida T-30 waa wax loo isticmaalo, maaha sida makiinadaha kale ee fasalka, mashiinka. Shaqadiisu waa wax badan: laga bilaabo beero beerta hore iyo beeraha khudradda si loogu qaado gawaarida.
Ma taqaanaa? Intii lagu jiray dagaalkii labaad ee dunida, tarbiyeyaasha dib-u-dhiska ee dib-u-dhiska ayaa loo isticmaalay inay yihiin unugyo dagaal, iyada oo aan la helin taangiyo.
Qalabka tareenka iyo isbeddelkiisa
"Vladimirovets" T-30 waxay leedahay sharaxaad ku saabsan sida qalabku u qalabaysan yahay kiis adag (shey), hubinta badbaadada inta lagu jiro shaqada. Mashiinkaani wuxuu leeyahay muraayadaha hore, kaas oo siinaya maneuverability. Muraayadaha dambe ayaa hogaaminaya oo weynna cabbiraya, oo si wanaagsan u bixinaya. Qolka ayaa leh qalab kuleyliya iyo qaboojinta. Tusaaluhu wuxuu ku shaqeeyaa laba gacmood iyo ped pedals si loo xakameeyo. Qalabka waxsoosaarida ee Vladimir.
Dhamaan naqshadaha iyo qaybaha waxay leeyihiin awood xoog leh iyo isku xirnaanta, hubinta badbaadada iyo awoodda weyn. Iyada oo ku saleysan tayada aan fiicneyn, "maskaxda" ee warshadani waxay soo saartay kor u kaca waxayna heshay dalab weyn. Taasi waa sababta noocyada tareenada "Vladimirets" ay ku qoran yihiin liiska mashiinada shaqeynaya oo kaliya shaqada beeraha, laakiin maalin kasta iyo shakhsi ahaanba shakhsi ahaan. Waqtigan xaadirka, soosaarka qaabka looma fulin, laakiin sababtoo ah muddada dheer ee isticmaalka, marka aad iibsaneyso aaladda la isticmaalo, waxay kuu adeegi doontaa sannado badan oo aan dhibaato lahayn.
In aad barato MT3-892, MT3-1221, Kirovets K-700, Kirovets K-9000, T-170, MT3-80, Vladimirets T-25, MT3 320, MT3 82 traktors, oo sidoo kale loo isticmaali karo Noocyada kala duwan ee shaqada.
Waxaa sidoo kale laga helaa wax ka beddelka iibsashada cagafcadan:
T-30-70 - qalab kaas oo lagu tilmaamayo isdiljiriin hydrostatic ah iyo qalab laba-saxan, taas oo ka duwana nuquladii hore. Qaabka ayaa loogu talagalay ujeedooyin isku mid ah sida T-30. Waxaa loo isticmaali karaa ujeedooyinka beeraha ka hor intaadan beeran.
T-30-69 - qalab kaas oo leh qalab hal-xargo iyo dirxin farsamo. Waxay leedahay qiyaas aad u sarreeya - ilaa 1600 kg. Qodobka wadista baabuurka waa gawaarida dambe, iyo qoryaha hore waa la maamuli karaa. Marka lagu daro qalabka isdabajoogga ah, qaabka waxaa loo isticmaali karaa qalabka horay loo beeray.
Waa muhiim! MQaabka ayaa la joojinayaa, sidaas darteed iibsigu wuxuu suurtagal noqon karaa oo kaliya xaalad la isticmaalay.
T-45 - Qalabka, oo ah isbeddelka ugu weyn ee T-30, oo leh qadar D-130 ah. Waxay leedahay miisaan culus oo ku filan, waxaana loo isticmaali karaa ujeedooyin kala duwan oo ku saabsan beeraha, beeraha, ujeedooyinka kor u qaadidda iyo beeridda dhulka.
T-30A-80 - loogu talagalay isticmaalka shuruudaha korodhka culus. Waxay leedahay ugu badnaan, marka la barbardhigo isbeddelada kale, ilaa 2100 kg. Run ahaantii wuxuu u guuraa impassible iyada oo ay ugu wacan tahay qaaciddada 4 * 4. Si fudud ula qabsan kartaa dhammaan noocyada daaweynta ciidda. Waxaa loogu talagalay in la qaado ulajeeddooyin, iyo sidoo kale shaqooyinka beeraha, beeraha, beeraha.
Ma taqaanaa? Tilmaamahan ayaa "iftiimay" filimka "Kin-Dza-Dza", halkaasoo uu u adeegay baraf baraf.
Tixgeli joqraafiga T-30 iyo astaamaha farsamo ee qaabka miis.
Awooda 30 "
Gaadhi Nidaamka 4-kudhexeeya
Nooca engine ee T-30 2 silyley
Qaboojinta qaboojinta Xilliga hawada
Xawaareynta xawaaraha, xawaaraha 2 kun r / min.
Nooca shidaalka Mashiinka Diesel
Isticmaalka shidaalka 180 g / l saacaddiiba
Qiyaasaha tareenka Dhererka waa 3.180 m, dhererkeedu waa 2.480m, ballaadhkuna waa 1,560 m
Sanduuq adag Mechanical
Awood darin 600 kg
Xawaaraha Ilaa 24 km / h
Suurtagalnimada xayawaanka beerta
Qaabkan ayaa si gaar ah loogu talagalay isticmaalka beeraha: beerista beeraha ee isku xiran, daryeelida dalagyada. "Vladimirovets" ayaa sidoo kale si fiican loo isticmaali karaa beeraha iyo beerta. Maaddaama maneuverability iyo size yar, T-30 badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu shaqeeyo beeraha canabka ah.
Si aad uga shaqeysid aag yar, sidoo kale waxaad isticmaashaa mashiinka jasiiradda Japan.
Tileytani waxay leedahay iskudhaf aad u sareeya oo waddada ka baxsan iyo carrada ciriirsan, oo ay bixiso qalabka hore ee giraangirta.
Waa muhiim! Kahortaga warqadda gawaarida ayaa la hubin karaa iyada oo la xirriira taageerada buundada bogga.
Wareegga waxaa loogu talagalay shaqada hal qof, iyo cimiladeeda cimiladu waxay hubisaa in hawlgalku socoto muddo dheer iyada oo aaney dhib ku ahayn darawalka. Naqshadaynta nadiifinta muraayadda waxay u shaqeysaa in ay ka soo saarto wasakhda iyada oo aan wax dhib ah, iyo dhalooyinka waaweyn ee muraayadaha waxay bixiyaan 360 ° muuqaal weyn. Sidoo kale dhinaca cagajiraha waxaa jira qaabab kala duwan oo u oggolaanaya inaad xirto noocyo kala duwan oo ah qalab haddii loo baahdo. Iyadoo lagu saleynayo kor ku xusan, qaabkani waa mid aan lagama maarmaan u tahay shaqada beeraha iyo berrinka hore, iyo sidoo kale marka la soo dhoofiyo alaabo dhibaato iyo dhul adag oo noocyo kale oo gawaarida ah. Traktor waa mid joogto ah oo lagu kalsoonaan karo, dayactir wanaagsan, waxaana loo tixgelinayaa in uu u adkeysan karo suurtogalnimada waxyeello dibadeed.
Ka mid ah cilladaha, kaliya suurtogalnimada in yar yar (ilaa 700 kg) marka la soo qaado badeecadaha iyo la shaqaynta cawska kala duwan.
Sidaa daraadeed, qaabkani wuxuu qalabku u shaqeynayaa oo uu la qabsan karaa hawlo kala duwan. Inkasta oo ay caan ku tahay, xilligan xaadirka ah waxaa jira noocyo kale oo aad u sareeya oo horey u soo saaray wax soo saarka waxayna bedeleen T-30, laakiin qalabka waxaa laga heli karaa inta badan iibinta xaalad la isticmaalay.